दूषित पानीकै कारण झाडापखाला फैलिएकोे पुष्टि - नागरिक रैबार::Nagarikraibar.com दूषित पानीकै कारण झाडापखाला फैलिएकोे पुष्टि - नागरिक रैबार
दूषित पानीकै कारण झाडापखाला फैलिएकोे पुष्टि
२३ वैशाख, गुल्मी
मुसिकोट नगरपालिका-४ दजाकोटमा दूषित पानीकै कारण झाडापखला फैलिएको पुष्टि भएको छ । यही वैशाख १० देखि सिङ्गो गाउँमा फैलिएको झाडापखालाको मुख्य कारण पानीमा रहेको ईकोलाई जिवाणु भएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।
गाउँमा झडापखालाको प्रकोप बढ्दै गएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको टोलीले गत साता प्रकोप क्षेत्रमा पुगेर बिरामीहरुको दिसा र पानीको नमूना संकलन गरी परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा पठाएको थियो ।
बिरामीको दिसा परीक्षण गर्दा सिगेला नामक जिवाणुसमेत भेटिएको बताइएको छ ।
स्थानीयले उपभोग गर्दै आएको पानीको मुहानमा फोहोरका भएकोले पानी दूषित भएको र झाडापखालाको प्रकोप बढेको गुल्मी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर उत्तम पच्याले बताए ।
नेपाल सरकार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुले गरेको परीक्षणले पानीकै समस्याका कारण झाडापखालाको संक्रमण बढेको पुष्टि भएको डाक्टर पच्याले जानकारी दिए ।
झाडा पखलाबाट २ सय बढी बिरामी भएका थिए । एक जनाको मृत्यु भएको थियो । झाडापखाला अहिले पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आइसकेको छ ।
झाडापखला फैलिएको स्थानमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मी, गुल्मी अस्पताल, मुसिकोट नगरपालिकाका स्वास्थ्य टोलीले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य शिबिरका कारण झाडापखला नियन्त्रणमा आएको हो ।
सिङ्गो गाउँ नैै प्रभावित बनेपछि काठमाडौंबाट बिशेषज्ञ डाक्टरसहित अनुसन्धान गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको समन्वयमा इपीडीमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा अनुगमन गरेका थिए ।
झाडापखला फैलिएको स्थानमा जिल्ला स्वस्थ्य कार्यालय गुल्मी, गुल्मी अस्पताल, मुसिकोट नगरपालिकाले सचेतना कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेका छन् ।
प्रभावित क्षेत्रमा स्थानियलाई राखेर पानी उमालेर प्रयोग गर्न, हात मिचिमिची धुनेलगायतका सल्लाह, सुझाव दिई विरामीसँग भेटघाट गरेर सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको मुसिकोट नगरपालिका गुल्मीका स्वस्थ्य संयोजक डिबी जिसीले बताए ।
प्रभाबित क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या भएपछि नगरपालिकाले दैनिक ट्याकरबाट पनि पानी बितरण गरिरहेको नगर प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले बताए ।
सोही स्थानमै ०७३ साल वैशाख १८ गते पारी जंगलमा लागेको आगो पानीको अभावमा स्थानीयले नियन्त्रणमा लिन नसक्दा वारी दजाकोटमा फैलिएर गाउँ खरानीमा परिणत भएको थियो ।
५६ घरगोठ जलेर नष्ट भएको थियो भने १ जनाको मृत्युसमेत भएको थियो ।
जेलबाटै विद्यालय जाँदै बिपिकाले, नर्सरीमा ९६ प्रतिशत ल्याइन्
प्रदेश ५ ब्युरो बुटवल : नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधार इलाका मानिन्छ, प्रदेश ५ । सशस्त्र द्वन्द्वको केन्द्र रोल्पासहित कपिलवस्तु, दाङ र रूकुम पूर्वमा विप्लव कार्यकर्ताको बाहुल्य देखिएको छ । उनीहरूले विगतमा झैं ‘जनसरकार’ खडा गरेका छन् । उनीहरूका उर्दी र चन्दाको मुख्य निशाना भने जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकार बनेका छन् । प्रदेश […]
प्रदेश ५ को योजना आयोग उपाध्यक्षमा गौतम नियुक्त
बुटवल : ५ नम्बर प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. इश्वर गौतम नियुक्त भएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गौतमलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। गौतम बुटवलस्थित लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख हुन्। यसअघिका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले राजिनामा दिएपछि सो पद खाली रहेको थियो सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले श्रेष्ठको राजिनामा स्वीकृत गर्दै गौतमलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएको जानकारी दिए । […]
भैरहवा । रोल्पा नगरपालिका–६ का सन्तकुमार घर्तीमगर कक्षा १२ मा पढ्दै थिए । काकाका छोरा दुर्गासिंह घर्तीमगरले स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गर्न बोलाएपछि भारतको गोरखपुर गए । दुर्गासिंहले सन्तकुमारलाई गोरखपुरस्थित ओरियन्टस ग्लोबल मार्केटिङ प्रालिमा पुर्‍याए  । त्यहाँ उनले ‘मल्टिलेभल मार्केटिङ’ गर्न ८ हजार भारु तिरेर एक साताको तालिम लिए र भारु १ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि बोकेर फर्किए । त्यसपछि […]
गुल्मी ३ असार। यहाँका जनप्रतिनिधि अहिले आगामी वर्षका लागि योजना बनाउन छलफलमा व्यस्त छन् । धुर्कोट गाउँपालिकामा ठूलो उद्योग छैन । पढे–लेखेका धेरै युवालाई स्वरोजगार बनाउने एउटै उपाय हो, कृषि, पशुपालन र उत्पादन । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तरकारी, कफी, सुन्तला, मासु र अण्डा उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने तयारीमा रहेको पालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले बताए । […]
प्रशासन शैली जनतामैत्री बनाऔं : मुख्यमन्त्री पोखरेल
२२ वैशाख, बुटवल प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले परम्परागत प्रशासन शैलीलाई जनतामैत्री बनाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘कतिपय आदतै गलत छन्, हिजो केन्द्रबाट निगरानी कम हुन्थ्यो,अब त ठाउँठाउँमा सरकार छन्,’ उनले भने । तेश्रो अधिबेशन (बिधेयक )को अन्तिम संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले साझा सूचीमा भएका कानून केन्द्रले नबनाउँदा प्रदेशमा पनि समस्या भएको बताएका छन् […]
सँगै भोज खाँदै गरे छुवाछुत अन्त्यको घोषणा
२२ वैशाख, बुटवल रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा ‘दलित’ र ‘गैरदलित’ समुदाय एकै थलोमा उपस्थित भएर जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । गत वैशाख ५ गते शुद्धोधन ४ फर्साटिकरका रामबहादुर विश्वकर्माकी छोरी आरतीको विवाह भोज केही गैरदलितहरुले बहिष्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि यस्तो प्रतिवद्धता आएको हो । शुद्धोधन गाउँपालिका र दलित वर्ग उत्थान गाउँ समन्वय […]